I-China eyenziwe ngokwezifiso ze-Fibre Reed Stacks ezimnyama zefektri yoSetyenziso lweoyile eyiDiffuser kunye nabaxhasi | IHoyer
Iintambo zeRed Feri zoMdaka oMiselweyo oSetyenzisiweyo kwi-Diffuser oil Set
Iitoti ze-reed diffuser ikakhulu ziqukethe i-rattan sticks kunye ne-fiber sticks, kwizixhobo zefayibre, unokukhetha phantse nawuphi na umbala owufunayo, kwaye awuyi kufikwa. Sipakisha i-120pcs njengengxowa, enokuthi ibe yeyokwanela imfuno yekhaya, ungayisebenzisa ukutshintsha izikhuni kwigumbi lokuhlala, iofisi, imarike, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlambela negumbi lokulala, nayiphi na indawo othanda kuyo.
Ubungakanani: I-3 * 250mm
Umbala: mhlophe, mnyama okanye ngokwemfuneko yakho
Inzuzo: Intonga yeengcongolo isempilweni ngokwaneleyo ukuba inokusetyenziswa mihla le enokukhupha ivumba leoyile ngokuthe ngcembe ukwenza umoya uqhubeke uhlaziyekile. Sisipho esihle samaxesha amaninzi njengosuku lokuzalwa, umtshato, iKrisimesi, unyaka omtsha kunye nokufudumala kwendlu.
Ubungakanani: Ubude be-25cm (8 intshi), ububanzi be-3mm okanye 5mm, okanye nabuphi na ubukhulu obucwangcisiweyo.
Ukusetyenziswa: Beka nje izinti ezininzi zerattan okanye iifayibre kwiibhotile ezingafaniyo, kwaye ugalele ivumba okanye ioyile yokulinganisa ngokunjalo, izinti ziya kuyithatha kancinci ioyile kwaye emva koko luzise ivumba lomoya xa ixesha lihamba. Akungomhlobiso omnye ekhaya, kunokunceda ukugxotha ukunambitheka kwangaphandle kunye nokuhlaziya umgangatho womoya.
INKONZO YABASEBENZI EBALASELEYO-Siza kunikezela ngeenkonzo zethu ezilungileyo kubathengi bethu, unokufumana i-100% yesiqinisekiso kwinkampani yethu. Ukuba ufumana nantoni na engenakukwanelisa, nceda uqhagamshelane nathi kwaye siya kuzama konke okusemandleni ukusombulula, ukuyilungisa.
Umbala Mhlophe, mnyama Ukuprinta okanye ukwenza umbala usebenze wamkelekile
I-MOQ I-50pcs Inani elincinci liyamkeleka ukuba sinesitokhwe
Edlulileyo: Intyatyambo yeSola eQhakazileyo eyenziwe ngeZandla eyomileyo yeoli yeZithambiso
Okulandelayo: Iitreyithi zeRittan Reed Diffuser Stick eziBekekileyo
ibhotile ye-aroma diffuser
ibhotile ye-diffuser emnyama
iibhotile ezingenanto ezingenanto